I-Ultrasonic Reactor yeBiodiesel Production - I-Hielscher Ultrasound Technology
Hielscher unikeza ultrasonic ukuxuba reactors for ukukhiqizwa biodiesel nganoma yisiphi isilinganiso. Ukuxubana kwe-ultrasonic kuthuthukisa ukudluliswa kwegazi nokuphendula kinetics okuholela ekutheni kube nokudluliselwa ngokushesha futhi isivuno esiphezulu. Igcina i-methanol eyengeziwe ne-catalyst.
Amakhamera we-Ultrasonic anconywa amandla okukhiqiza ka-0.25ton (80 gal) ngehora noma ngaphezulu. I-Hielscher inikeza izigubhu ze-ultrasonic zomthamo ngamunye kuze kufike ku-16ton / hr (5100 gal / hr). Ngokuvamile kufanele ucabange ukusebenzisa amayunithi amathathu kuya kwahlanu ngokuhambisana ukuze uthole ukuhlukahluka kwamazinga okukhiqiza.
Izindleko Zezansi Eziphansi kanye Nokuthuthukisa I-Biodiesel Yield
I-methanol eyengeziwe kanye ne-catalyst yizici ezibalulekile zokukhiqiza kwe-biodiesel. Ama-reactors e-Hielscher ultrasonic afaka isisindo se-cavitational kuze kuhlanganiswe inqubo yokuxuba. Lokhu kukunika amaconsi amancane we-methanol okuholela ekusebenziseni i-methanol ne-catalyst ukusetshenziswa. Ngakho-ke, i-methanol encane ne-catalyst iyadingeka. Ngaphezu kwalokho, i-cavitation ithonya ama-reaction kinetics, okuholela ekusheshweni nakakhulu ukuguqulwa kwe-transesterification.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonics ne-biodiesel processing processing!
Ukukhiqizwa kwe-biodiesel yobukhulu obuncane naphakathi kwe-9ton / hr (2900 gal / hr), i-Hielscher ikunikeza UIP500hd, I-UIP1000hd futhi I-UIP1500hd. Lezi zinhlaka ezintathu ze-ultrasonic zihlangene kakhulu, kulula ukuhlanganisa noma ukubuyisela kabusha. Zakhelwe ukusebenza okulukhuni ezindaweni ezibucayi. Ngezansi uzothola amasethi we-reactor anconywayo wezinga lobubanzi bokukhiqiza.
Isikali esigcwele se-Industrial Biodiesel Reactors
Ukukhiqiza izitshalo zezimboni ze-biodiesel Hielscher inikeza UIP4000, I-UIP10000 futhi UIP16000. Lezi zincubungula ze-ultrasonic zenzelwe ukuqhutshwa okuqhubekayo kwezinga eliphezulu lokugeleza. I UIP4000 futhi I-UIP10000 ingahlanganiswa neziqukathi ezijwayelekile zezimpahla zasolwandle. Ngaphandle kwalokho, wonke ama-processors amathathu atholakala emakhandini ensimbi angenalutho. Ukufakwa okuqondile kudinga isikhala esincane. Ngezansi uzothola amasuphu amisiwe anconyelwe amazinga okusetshenzwa kwezimboni ezijwayelekile.
6.0 kuya ku-12.0
1920 kuya ku-3840
10.0 kuya ku-20.0
3200 kuya ku-6400
15.0 kuya ku-30.0
4800 kuya ku-9600
24.0 kuya ku-48.0
7680 kuya ku-15360
40.0 kuya ku-80.0
12800 kuya ku-25600
Ukuhlanganiswa kwe-Inline Ultrasonic yamafutha ne-Methanol
Ama-reactors exuba ama-Ultrasonic agodla ama-agitators we-tank namanye ama-mixers we-shear ashukumisayo. I-reactors ye-ultrasonic ngokuvamile ifakwe ukuxuba imifudlana emibili yokuphakelayo. Amafutha ne-methanol (ene-catalyst). Ngenxa yalokhu, ukuxubana okungekho emthethweni kuqhutshelwa ku-reactor ultrasonic, lapho cavitation ultrasonic ukuxuba kanye emulsifies kokubili ama-reagents ngaphakathi kwamasekhondi angu-5 kuya kwangu-15. Lena inqubo yokuxuba e-inline. Lapho umxhuma uphuma egazini lokugeleza kwamaseli, i-glycerin izohlukaniswa ngamandla adonsela phansi ngaphakathi kwamaminithi angaphansi kwengu-60. Ngaphandle kwalokho, ungondla ukuxuba ibe yi-centrifuge ngemuva kwemizuzu eminingana yokuhlala / isikhathi sokusabela. Ukuxuba okuhambisanayo kunciphisa inombolo nenani lamathangi asetshenziselwa ukucubungula okujwayelekile. Lokhu kuthuthukisa ukusetshenziswa kwezimali.
Sicela ugcwalise leli fomu ukucela ulwazi oluthe xaxa mayelana nokuhlanganiswa kwe-ultrasonic yokucubungula kwe-biodiesel.
I-ultrasonic Transesterification yamafutha ku-Biodiesel
Impact of Ultrasonication on Biodiesel Ukucubungula Ukusebenza
Uhlu lwabahlinzeki bamaTanks namaphampu we-Biodiesel Production